Njengamanye amawebhusayithi amaningi, Martech Zone isebenzisa amafayela we-log. Imininingwane engaphakathi kwamafayela we-log ifaka amakheli e-internet protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), isitembu sosuku / isikhathi, amakhasi akhomba / aphumayo, kanye nenombolo yokuchofoza ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi ezungeze isayithi, bese uqoqa imininingwane yabantu. Amakheli e-IP, neminye imininingwane enjalo ayixhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhomba uqobo
Ukusetshenziswa kwe-Google kukhukhi ye-DART kuyinika amandla okuthumela izikhangiso kubasebenzisi ngokuya ngokuvakasha kwabo Martech Zone namanye amasayithi akwi-Intanethi.
Kufanele uthintane nezinqubomgomo zobumfihlo eziqondene nalezi zinethiwekhi ezivela eceleni ukuze uthole ulwazi oluningiliziwe ngemikhuba yazo kanye nemiyalo yokuthi ungakhetha kanjani ukuphuma kwemikhuba ethile. Martech ZoneInqubomgomo yobumfihlo ayisebenzi, futhi asikwazi ukulawula imisebenzi, yabanye abakhangisi noma amawebhusayithi.
Uma ufisa ukukhubaza amakhukhi, ungakwenza lokho ngokusebenzisa izinketho zesiphequluli sakho ngasinye. Imininingwane eningiliziwe mayelana nokuphathwa kwamakhukhi ngeziphequluli ezithile zewebhu ingatholakala kumawebhusayithi aqondene neziphequluli.